दिल्लीमा जस्तै काठमाडौमा को'ठी [ अण्डरग्राउण्ड रिपोर्ट ] - जनबोली न्यूज नेटवर्क प्रा. लि
गृहपृष्ठ » पत्रपत्रिका/अनलाईनहरु » दिल्लीमा जस्तै काठमाडौमा को’ठी [ अण्डरग्राउण्ड रिपोर्ट ]
काठमाडौ । कोठामा डस्ना र च्यादर ओछ्याइएको थियो । दिनभर ३ दर्जन पुरुषको भ्या’इ’सके’की उनि निकै क’मजोर थिइन । गत आइतबार मध्यराति २ बजे नेपाल प्रहरीको १०० नम्बरमा एक महिलाले रुँदै फोन गरिन्– मलाई साहुनीले … लागिन्, कृपया तपाईहरु आएर ब’चाउनुस् । लगातार तीनपटक उनले फोन गरेपछि केहीबेरमै बालाजु र महाराजगञ्जको प्रहरी टोली गोंगबु बसपार्कसँगैको कविता खाजाघरमा पुग्यो । प्रहरी पुग्दा पनि ती महिला चि’च्या’उँदै थि’इन् र उनीमाथि बाँ’सका भा’टा र ला’ठी च’लिर’हेको थियो । कविता खाजाघरको माथिबाट हा–ने–को बाँ’सको भा’टाले प्रह’रीको टा’उकोमा पनि ला’ग्यो । कु–टा–इ खाने महिलाको उद्धार गर्न खोज्दा प्रहरीलाई समेत त’थाना’म मु’ख छा’डिन् ‘खाजा घर’की साहुनीले ।
प्रहरीले कु–टा–इ खाने महिलालाई उद्धार गरेपछि अर्को कोठाको ढोकाभित्रबाट महिला क’राएको आवाज आयो । ढोका खोलेर हेर्दा १४–१५ वर्षकी किशोरी गु’हार माग्दै रहिछन् । खाज घरकी साहुनीले यो मेरी छोरी हो भनिन् । तर, उद्धार गरिएका महिलाले ‘ऊ पनि मजस्तै’ काम गराउन राखिएकी बहिनी हो भनेपछि खाजाघरकी साहुनीको खास कार्य खुल्यो । बाहिरबाट हेर्दा खाजा घर थियो । सटरभित्र तीनवटा टेबुल थिए । तर, पकाउने र खाने भाँडाहरुसमेत थिएनन् । सिसाको ढोका खोलेर माथि चढेपछि चारवटा कोठामा डस्ना र च्यादर ओछ्याइएको थियो ।
खासमा त्यो खाजाघर होइन, को’ठी रहेछ । अनि प्रहरीलाई फोन गरेर बोलाउने र ढोका थु’नेर ब’न्दी बनाइएका महिलालाई ‘पु’रुषका लागि सु’म्पिने रहेछ । प्रहरीले ३५ वर्षीया दक्षिणा सुवेदी र १५ वर्षीया रचना पुन मगर (दुवै नाम परिवर्तन) लाई राति नै केरकार गरेपछि खुल्यो– उनीहरुलाई खाजा घरकी सञ्चालिका कोठीवाली म्याग्दीकी मनु छन्त्यालले अ’घोषित रुपमा बाध्य बनाएर ‘यौ–नका–र्य’मा लगाएकी रहिछन् ।त्यस रातका अनेक ग्राहकले अ’प्राकृ’ति’क यौ–’न स’–म्ब–न्ध रा–ख्न’ द–बा’ दिएपछि प्र’तिवाद गर्दा विवाद बढेर कु–ट–पि–’ट भएको रहेछ ।
त्यस दिन दक्षिणा सुवेदीले दिनभरिमा ३२ जना ग्रा’हकको चित्त बुझाइसकेकी थिइन् । थाकेर बसेकी उनलाई ‘को’ठीवा’ली’ले दुईजना फुच्चे आएका छन्, आज राति यतै बस्ने भन्छन्, चित्त बुझाउनू भनिन् । अञ्दाजी १४–१५ वर्षका किशोर हो’समा थिएनन् । तीमध्ये एक दक्षिणासँग गए भने अर्का रचनासँग गए ।खानपिनसँगै चित्त बुझाउने कार्य गरेपछि ती किशोर थप हौसिदै गएपछि प’शुव’त व्य’वहार गर्न थाले । दक्षिणाका अनुसार उनले मु’–ख र गु–’द्वा–र मै–’थु–न गर्न द’बाव दिए । यस्तो काम त नगर्ने भनेपछि झ’ग’डा गर्दै कोठीवालीलाई बोलाएर आपत्ति जनाए ।
त्यसपछि कोठीवाली आक्रोशमा आएर भु’त्ल्या–उँदै –कु–ट्न थालिन् ।दिनभर करीव ३ दर्जन पु’रुषको बा’स’नाले थकित भइसकेकी दक्षिणा निकै क’मजोर थिइन् । को’ठीवा’लीले ‘तँ बुढी भा–लुलाई अब राख्दिनँ, भर्खरका कलेज पढ्ने केटीहरु ल्याउँछु भोलिदेखि । तँ बुढी भा–’लु अहिले नै निस्केर गइहाल्’ भन्दै खे’द्न थालिन् । अचाक्ली भएपछि मोबाइलबाट १०० नम्बर डायल गर्दै दक्षिणाले पुलिस बोलाइन् । तर, को’ठीवा’लीले पुलिसले केही गर्दैन भन्दै उल्टै उनलाई थु–’नाउने ध–म्की दिन थालिन् । म्याग्दीकी मनु छन्त्याल को यो’ ध–न्दा धेरै वर्षदेखि गोंगबुको एउटा सटरभित्र चलेकै थियो ।
उनी भन्ने गर्थिन्, ‘घरबेटीलाई महिनामा ५० हजार र पुलिसलाई ५० हजार दिएकी छु । तिमीहरुले यहाँभित्र यस्तो ध–न्दा हुन्छ भनेर कसैलाई भन्यौ र पुलिसमा गयौ भने ५० लाख खर्च गरेर भए पनि तिमीहरुलाई बाँ’की रा’ख्दिन । चुपचाप मैले भनेको मानेर ग्राहक खुसी पार्‍यौं भने एकदिन काठमाडौंमा जग्गा किन्ने पैसा दिन्छु ।’’ज्या–न मा–’र्ने ध–’म्की र काठमाडौंमा जग्गा किन्ने पैसा पाउने प्रलोभन यिनै दुई कारण थिए द’क्षिणा र रचनाहरु खाजाघरभित्र दिनहुँ अ’–स्मि’–ता लु–’टा–उन वि’वश हुनुमा । त्यहाँ उनीहरुभन्दा अघि र पछि पनि धेरै युवती आए, केही दिन श’–रीर बे’–चेर पैसा नपाएपछि बे–पत्ता भए ।
उनीहरु किन प्रहरीमा गएनन् ?
सायद ५० लाख दिएर पनि मा–र्ने ध–म्कीको ड–रले नै हो कि ? तर, यसपटक दक्षिणाले जीवनबाटै हारेपछि प्रहरी गु’हारिन् ।जीवनमा धेरै हण्डर ठ’क्कर खाएर सबै उपाय सकिएपछि सिन्धुलीकी दक्षिणा घरको सरसफाइको काम गर्न भन्दै गोंगबुको त्यो खाजाघरमा पुगेकी थिइन् । ज्यामी काम गर्दा शरीरले साथ नदिएको र डि–प्रेसनको औषधी खान तथा छोरी पढाउन पैसा नपुगेपछि कुनै व्यक्तिले दक्षिणालाई त्यहाँ पुर्‍याएका थिए । जेठको पहिलो साता उनलाई त्यहाँ घरेलु श्रमिकका रुपमा लगि एको थियो ।गएकै दिन साहुनीले गेष्टलाई बि’–यर र स्न्या’क्स पुर्‍यायाउन लगाइन् ।
बि–यर लिएर कोठामा पुगेकी दक्षिणा फर्किन लाग्दा ग्राहकले समातेर ज–ब–’र्ज–स्ती ग’र्न खोजे । उनी भाग्न खोज्दा ग्राहकले साहुनीलाई बोलाए । साहुनीले ग्राहकले भनेबमोजिम गर्नु भन्दै ढोका थुनिदिइन् । त्यस दिन उनीमाथि ज–ब–र्ज–स्ती–क’–र–’णी भयो । उनले साहुनीसँग यस्तो काम गर्दिनँ भन्दै रोइन् । तर, उनीसँग अरु विकल्प पनि थिएन । वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रीमान १० वर्षदेखि सम्पर्कमा छैनन् । १५ वर्षको छोरो गँ–’ज–डी बनेर हिँडिसकेको छ । उनले १० वर्षकी छोरीको अनुहार सम्झिइन् । साहुनीले काठमाडौंमा जग्गा किन्ने पैसा केही महिनामै कमाइदिने प्रलोभन पनि दिइन् ।
सम्झेर ल्याउँदा उनको अगाडि कुनै विकल्प थिएन ।उनी खाजाघरभित्र अ’घोषित ब–न्ध–क थिइन् । कहिलेकाहिँ छोरीलाई भेट्न पाउँथिन् । छोरी एकजना छिमेकी बहिनीको जिम्मा लगाएर उनी काठमाडौंमा जग्गा किन्ने सपना देख्दै दिनमा कम्तिमा २० देखि ३५ जना सम्म यौ–’न पि–’पा–सु’– ग्रा–हकहरुको चि’त्त बुझाउँथिन् । एकजना ग्राहकबाट साहुनीले ५ सय देखि २ हजारसम्म बुझ्थिन् । तर दक्षिणाको हातमा एक पैसा परेन ।जेठदेखि माघ पहिलो सातासम्म उनी सय होइन, हजारको संख्यामा ग्राहकको शि’–का–र ब’निन् । तर, यो आठ महिनामा जम्माजम्मी करीव ५० हजार रुपैयाँ उनले पाइन् ।
एकातिर ज्या’न मा’–र्ने र छोरी बे–प–त्ता बनाउने ध–’म्की, अर्कोतिर घडेरीको प्रलोभन, यस्तै चुं–गु–लमा थिइन् उनी । कतिपय युवती चाहिँ केही दिनमै भाग्थे ।यसै सिलसिलामा एक महिनाअघि मात्रै १५ वर्षीया रचना खाजाघरमा आइपुगिन् । नुवाकोटकी रचना ८ वर्षको उमेर देखि काठमाडौंमा आफन्तको घरमा बसेर हुर्किन् । गत वर्ष काठमाडौंकै एक बोर्डिङबाट एसइइ दिएकी रचनाको पढाइ बिग्रिएपछि बेकरीमा काम गर्न थालिन् ।आफन्तले हेला गर्न थालेपछि एक्लै केही गर्छु भनेर काम खोज्दै हिँडेकी रचनाका सपना अन्ततः खाजा घरको ना–र–की–य कोठीमा पुगेर टुक्रिए ।
उनलाई पनि फूपुकी साथीले घरमा सरसफाइ गर्ने, लुगा धुने र भाँडा माझ्ने काम गर्ने भनेर लगेकी थिइन् । गएकै दिनबाट यौ–न–का–र्य’मा लगा’इयो । ती किशोरीले ‘म यस्तो काम गर्न आएकी होइन’ भन्दै प्रति’वा’द गरिन् । तर, साहुनी र उनका भतिजाले ‘नत्र के गर्न आएकी, नखरा पार्छेस् ?’ भन्दै ग्राहकसँग सु–त्न द’बाव दिए । उनका लागि त्यस्तो काम विल्कुल नयाँ र अनुभव बाहिरको थियो ।यौ–न स–म्ब’–न्ध भनेको प्रेम र भावनात्मक सम्वन्धमा अन्तिम आ–नन्द हो भन्ने अनुभव गर्न नपाउँदै उनी अपरिचित बाहुबलीबाट लु–टि’इन् । उनले पटक–पटक दक्षिणालाई ‘दिदी हामी यहाँबाट भागौं र पुलिसलाई खबर गरौं’ भन्थिन् ।’
तर, दिदीले भन्थिन्, ‘यिनीहरुसँग अरबौं रुपैयाँ छ, पुलिस प्रशासन सबै किनेका छन् । हामीलाई बाँ–च्न दिँदैनन् ।’आजको युग, त्यसमा पनि काठमाडौंमै कुनै महिला र बालिकालाई ब–’न्ध–क बनाएर यौ–न का–र्य–मा लगाइन्छ भन्ने कुरा धेरैले नपत्याउन सक्छन् । तर दक्षिणा र रचनाका दुःखका पत्रहरु पल्टाउने हो भने हाम्रो समाज कुन हदसम्म अ–प–रा–धको आ–हा–लमा डुबिरहेको छ भन्ने पत्याउन बाध्य भइन्छ । दक्षिणा र रचनाहरु अरु त सयौं होइन, हजारौंको संख्यामा ठूला शहरमा बे–चिइरहेका छन् ।प्रहरीले दक्षिणा र रचनाको उद्धार गरी शक्ति समूहको जिम्मा लगाएको छ ।
उद्धारपछि बेसहारा बनेका उनीहरुको जिबिकोपार्जनका आवश्यक सहयोग गर्नेबारे छलफल भइरहेको शक्ति समूहकी कार्यकारी निर्देशक सुनिता दनुवारले बताइन् । १५ वर्ष मुनिकी बालिका भएकाले रचनाको सन्दर्भमा सुरक्षित आवासमै राखेर उनको उच्च शिक्षाका लागि सहयोग गर्ने नीति लिइएको दुनुवारले बताइन् ।प्रहरीले ‘खाजाघर’की सञ्चालिका मुख्य अभियुक्त मनु छन्त्यालविरुद्ध मा–न–व बे–च–बि–ख–नको मुद्दा दायर गर्ने भएको छ । हाल उनलाई म्याद थप गरी थप अनुसन्धान भइरहेको महानगरीय प्रहरी प्रभाग महाराज गञ्ज का डीएसपी फणिन्द्र प्रसाईले बताए ।
१५ वर्षमुनिकी किशोरीको हकमा भने ज–ब–र्ज–स्ती–क–र–णी उ–द्यो–ग गरेको मुद्दा पनि दायर गर्नुपर्ने देखिएको प्रसाईले बताए ।यो घटनाको अनुसन्धान गर्दा धेरै तथ्यहरु फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ । कविता खाजा घरजस्तै गोंगबु बसपार्क र बालाजु क्षेत्रमा ज–ब–र्ज–स्ती –यौ–न का–र्यमा लगाउने ध–न्दाहरु चलेको आशंका प्रहरीको छ । प्रसाईले अरु शंकास्पद ठाउँमा पनि अ–प्रेसन चलाउन लागिएको बताए ।उनले भने– यो भनेको आन्तरिक बे–च–बि–ख–न नै हो । महिला र बालिकालाई ड–रध–म्की र प्रलोभन देखाएर ज–ब–र्ज–स्ती यौ–न–का–र्यमा लगाइएको छ ।
यसलाई हामीले मा–नव बे–चबि–ख–नमात्र होइन, बा–लिकामाथि ब–ला–त्का–रको ज–घन्य अ–प–राधका रुपमा पनि अनुसन्धान अघि बढाएका छौं ।त्यस दिनका ग्राहकलाई भने खाजाघर सञ्चालिका मनुले भगाएको दक्षिणा र रचनाले बताएका छन् । दक्षिणालाई ब–ला–त्का–र गर्ने ग्रा– हक भागेका थिए भने रचनासँग रहेका ग्राहकलाई मनुले आफ्नो भतिजो भन्दै जोगाएको उनीहरुले बताए । प्रहरीले मनुका श्रीमान गोविन्दलाई पनि आरोपीका रुपमा मुद्दा दायर गर्ने बताएको छ ।ना–र–कीय जीवनबाट मुक्त भएका दक्षिणा र रचना आफूहरुलाई यौ–न –क–र्मी बनाउने अ–प–रा–धीमाथि कडा कारवाही भएको देख्न चाहान्छन् ।
अ–प–राधीलाई कानुनले कारवाही गर्ला तर, उनीहरुको भविष्य भने अनिश्चित बनेको छ । छोरीलाई पढाएर सिलाई बुनाइ सिकाउने दक्षिणाको चाहना छ । तर, उनीसँग अब कुनै विकल्प छैनन् ।उनले भनिन्– मेरा आफन्तहरु गाउँदेखि काठमाडौंसम्म छन् । तर, मेरा लागि कोही पनि छैनन् । डि–प्रेस–नको दबाइ खाएको १५ वर्ष भयो । तर, मलाई जन्म दिने बाबुआमाले पनि के भयो भनेर सोधेनन् । छोरो गाँ–जा– –खा–एर हिँड्छ, उसले मलाई कहिल्यै पनि बुझेन । सरकारी स्कुलमा ५ कक्षामा पढिरहेकी छोरीको थप पढाइ र उसलाई बचाउने सहयोग भइदिए पुग्छ ।दक्षिणाले ०६० सालमा बिहे गरिन् ।
अब नागरिकता बनाउने बेला कुन थर राख्ने भन्ने पनि उनलाई थाहा छैन ।दुबैको कहानी उस्तै छ । दलालले घरमा सरसफाइको काम लाइदिने भनेर गोंगबुको खाजाघरमा छाडिदिए । खाजाघरकी साहुनीले ब–न्ध–क बनाएर यौ–न–का–र्यमा लगाइन् । दिनमा ३२ जनासम्म ग्रा–हकलाई सेवा दिँदादिँदै जिन्दगीबाट थाकेपछि भाग्न खोज्दा उल्टै म–र–णा–स–न्न पारेर कु–टि–ए । १५ र ३७ वर्षीया यी दुई दिदीबहिनीको व्यथा यहाँभन्दा बढी सुन्न पनि सकिन्न ।आखिर किन गरीव र बे–सहारामाथि नै यस्ता दुःखका पहाड खस्छन् ? के यिनीहरुले सम्मानका साथ बाँच्ने समाज कहिल्यै बन्दैन ? अनुत्तरित प्रश्नको भारी बोकेर फर्कियौं हामी ।